ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ငှက်ပျောသီး၊ လှေကား၊ ရေခဲရေ၊ မျောက်များနှင့် ကျနော်တို့”
အနော်တိတာကတော့ ကိုပေါဆီလာလာဖတ်ရင် ကွန်မန့်တခုခုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထုနှက် ရေးသွားရတယ်ဂျ။ (တကယ်က ဆီပုံးမရှိလို့) ဟီး.. ဒါကနောက်တာ။
ကြားဖူးတဲ့ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်က တခြားအကောင်တွေနဲ့။ ကြွက်ကလေးတွေလား မသိပါဘူး။ မျောက်ကတော့ အခုမှ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒီဥပမာလေးက လက်ရှိအခြေအနေကို ထင်ဟပ် ပီပြင်ပါပေတယ်။ (ဘာအခြေအနေလဲလို့ ဆက်မမေးနဲ့ နိုင်နံရေးတွေ ပြောရဲဝူး.)
မျောက်တွေကိုတော့ မသိဘူးဗျ။ ရေခဲရေဖြန်းတဲ့ ငတိတွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း သိပါရဲ့။
အင်း လူနဲ.မျောက်နဲ့ က ဒီနေရာမှာ.....
ဘုမသိ၊ ဘမသိ နှင်. ဝိုင်းသမနေကြတာပဲ
ဆိုင်တော့ မဆိုင်ပါဘူး..။ ကျွန်တော်လဲ ကိုပေါဆီမှာ စီပုံး မထားလို့ ဒီထဲ လာအော်သွားတယ်..။ အော့ဖ်တော့ပ်ပ်ပစ်က်ပါဗျာ..။
Firefox Version ၃.၀ ကို အထက်က လင့်ခ်မှ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ယူနိုင်ပါပြီ...။ မြန်မာစာံတော်ချိန် ည ၁၁း၃၀ နာရီမတိုင်မီ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပေးပါ...။ http://www.mozilla.com/en-US/firefox/?p=downloadday
အမှန်ကမျောက်တကောင်ငှက်ပျောသီးယူနေတုန်း ကျန်တဲ့မျောက်တွေ ရေအေးဒဏ်အောင့်ခံလိုက်ရင် အားလုံးဗိုက်ဝပြီး ပွဲပြီးသွားမှာ။။။ခုအခြေအနေကမျောက်ဟောင်းနဲ့မျောက်သစ်ရောနေတုန်းဆိုတော့အချင်းချင်းထုနှက်နေမဲ့အစားမျောက်ဟောင်းတွေသမိုင်းကိုရှင်းပြစည်းရုံးကြဖို့လိုပြီ။။။နို့မို့ငှက်ပျောသီးနဲ့တသက်ဝေးလိမ့်မယ်။။။
ဘလော့ဂါ ၅ကောင်..အဲ မှားလို့ ..မျောက် ၅ကောင် အကြောင်းလေးက ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဗျ...။။
ဒီမျောက်တွေမှာ...အချင်းချင်း ဖဲ့ ရမယ်ဆို တာ...အစွဲဖြစ်နေပြီဗျ....အဲဒီ မျောက်၅ကောင်ကို အပြင်ခေါ်ထုတ်ပြီး....ကိုပေါ..ဘလော့ ၅ခု ဖွင့်ပေးလိုက်ပါလား...။
အေးဆေးနေပါရစေ သားရယ်...။ ဘဘတို့ အေးချမ်းစွာပဲ နေချင်ပါတယ်..။ (ခေါက်ရိုးကျိုးနေသော အသံ၊ အသားကျနေသော အသံ...။) :D
ယောက်ခမကြီးကို ရန်မရှာစေရပါဘူးလို့ ...သားတာဝန်ယူပါတယ်...။
(ယောက်ခမကို ရိုသေသည့် အသားကျနေသောအသံ)..ဟိ။
ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်စရေးခါစက အစဉ်အလာကို တော်လှန်ခြင်း ဆောင်းပါးကို ဒီပုံပြင်နဲ့ ဖွင့်ခဲ့တယ်။